စိတ်ကူးပုံရိပ်: ၂၁ရာစု မှာလွမ်းရမှာလား
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 10:11
အတွေးတွေ ကောင်းတယ်ပုံရိပ် .. အဲဒီအကြောင်းဆန်ဆန် ကိုယ် တိုးလို့တန်းလန်း ရေးထားတာလေး တစ်ခုရှိတယ် .. နောက်ရက် ဆက်ရေးဦးမှ.. inspiration ရသွားပြီ.
" ကျွန်မ ဘာကြောင့်ဖြစ်တည် လာရသနည်း ဟူသောမေးခွန်းသည် ဘယ်လိုဖြစ်တည် မှာနည်းဟူသော မေးခွန်းလောက် အရေးမကြီးပါ။
သက်တန်.သည် ရောင်စုံ တံတားကြီးသာ ဖြစ်ပါစေတော့။ ယုန်ကလေးနဲ. အဘိုးအိုသည် လည်း ဆန်ထောင်းပါစေတော့။ ဖိုးလမင်းကြီးသည် ထမင်းဆီဆမ်းကို ရွှေလင်ပန်းနှင့် ဆက်၍ ပေးနိုင်ပါစေ။ ရုပ်နှင့်နာမ်သည်သဟဇာတ မျှစွာ တည်ရှိနိုင်ပါစေ။ "
မပုံရိပ်ရေးတဲ့ စကားပြေ က တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ ... ဆရာမ ကြည်အေးရဲ့ ကဗျာကောင်းတာက တစ်မျိုးပေါ့ ... ကြိုက်တယ်ဗျ ...
ဟိုတစ်နေ့က ကျနော် ရှပ်တီးရှပ်ပျာ လာလည်ပြီး ကိုပုံရိပ် လို့ လွဲ ခဲ့တာအတွက် တော်တော်အားနာသွားတယ်ဗျာ ... ခု အဲဒါလာတောင်းပန်ရင်းနဲ့ ရေးထားသမျှ အားလုံး စိတ်အေးလက်အေးဖတ်သွားပါတယ် ... တော်တော် ကြိုက်တယ်ဗျာ ... ရေးဟန် ၊ စိတ်ကူး ၊ အသုံးအနှုန်း ... အားလုံးပါပဲ ...
များများရေးပါလို့ တော့ မတိုက်တွန်းပါဘူးဗျာ ... ရေးသမျှ လာဖတ်မှာတော့သေချာသွားပြီ ။ ကျေးဇူးဗျာ...
21 June 2007 at 18:58
အားလုံးပဲ အားပေးကြလို့ ကျေးဇူးပါ။ နောက်ထပ်စာတွေ ရေးဖို့အတွက် အားရှိသွားပြီ….ဟီး ဟီး။
မပန်...မပန်ရေး တာကို မျှော်နေမယ် နော်။
ကိုမိုးညို…တောင်းပန် စရာမလို ပါဘူး။ ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။  စာတွေအားလုံး ကိုသေချာ လာဖတ်သွား တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်မကို အားပေးမဲ့လူ တစ်ယောက်တိုး လာလို့ ၀မ်းသာလှပါပြီ။
မပုံရိပ်ရေ… ဒီစာကို သဘောကျတယ်။
ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အမေးကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူရှိသမျှ လွမ်းည မပြီးဆုံးပါဘူး၊ လရှိသမျှ လူတွေက မော့ကြည့်ဦးမှာပါပဲ။ ဆုံးသလား အောင်သလားကတော့ ကိုယ့်ရှုထောင့်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့ဗျာ။ တချို့ ပညာတွေက သိပြီး မေ့ထားရမယ့်၊ မေ့ထားလို့လည်းရတဲ့ ပညာတွေပါ၊ ဒါပေမယ့် အရင်မသိလို့တော့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ လပေါ်မှာ ဆန်ဖွပ်တဲ့ အဖိုးအို မရှိမှန်းသိလည်း လကို ကြည့်ပြီး လွမ်းနိုင်ပါတယ်၊ မရှိမှန်းသိရက် လွမ်းတာနဲ့၊ ရှိတယ်ထင်ပြီး လွမ်းတာနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မကွာပါဘူး။ အက်ဂါအယ်လင်ပိုးရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲကလို “Is all that we see or seem butadream withinadream?” လို့မေးရင်တောင် ကိုယ့်စိတ်ပေါ်အခြေခံပြီး “Yes” လို့ ဖြေလို့ရနေမှတော့ လပေါ်လူရောက်ရုံနဲ့ လရဲ့ အလှနဲ့ လရဲ့ ဘ၀ မပျောက်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဆရာမကြည်အေးနဲ့ မပုံရိပ်တို့ကို ပြောချင်တာကတော့ စိတ်မပူပါနဲ့၊ လ ဟာ လ ပဲ ဖြစ်ဆဲပါ၊ သက်တံ့ကြီးဟာလည်း ရောင်စုံတံတားကြီးပဲ ဖြစ်ဆဲပါ။ လူ့သဘာဝအရ မသိရ မနေနိုင်လို့ လူတွေရှိနေသရွေ့ကတော့ သြကာသ လောကကြီး တစ်ခုလုံးကို ဖြုတ်လိုက် တပ်လိုက်နဲ့ အဖြေရှာနေဦးမှာပါပဲဗျာ၊ အဲဒါကိုတော့ ဘယ်သူကမှ တားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
21 June 2007 at 22:34
ကိုပု ပြောတာကို သဘောတူ သင့်သလောက် တူပါတယ်။ လူတွေရဲ့ သိချင်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်စရာ မလိုပါ။ သိပ်ပြီး ရုပ်ဝတ္ထုဆန် လာမှာလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုမျှ သာဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို သိပ္ပံနည်းကျ ဖြေရှင်းချင်လို့ မရပါ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောချင်တာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုလိုဝေဖန် ထောက်ပြတာနဲ့ ကျွန်မစာကို လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
22 June 2007 at 07:03
ကိုပုကြီးက ဒီလိုမှတ်ချက်ချသွားတော့ ဆိုတာလေး အဲဒီကဗျာလေးသတိရသွားပြီး What is reality? ဆိုတာ ဆက်တွေးမိတယ်.. ဘလော့ဂါတွေရဲ့ virtual world ကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ အိပ်မက်မက် နေကြတာပဲနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် "the grains of the golden sand" ကို ဘယ်အချိန်အထိ ဆုတ်ကိုင်ထားဖြစ်မလဲတော့ မသိဘူး။
ပို့စ်လေးအတွက် ထပ်ဆင့်ကျေးဇူး .. ပုံရိပ်..
22 June 2007 at 15:01